Madaxweynaha Afganistan Karazay oo ku eedeeyey Maraykanka iyo NATO inay marar badan ku xad-gudbeen madax-banaanida wadankiisa – idalenews.com
Madaxweynaha Afganistan Karazay oo ku eedeeyey Maraykanka iyo NATO inay marar badan ku xad-gudbeen madax-banaanida wadankiisa
Madaxweynaha dalka Afganistan Xamiid Karsaay oo ka hadlayey shir-jaraa’iid oo uu ku qabtay magaalada Kabul ayaa sheegay in wadanka Maraykanka iyo Ciidamada NATO inay si xoogleh ugu xad-gudbeen madaxbanaanida iyo dowladnimada Afghanistaan.
“…Maraykanka iyo NATO waxay qeyb ka yihiin dhibaatada heysata shacabka Afghaanistaan, waxay marwalba oo ay doonaan ku xad gudbaan madax-banaanida wadanka Afghaanistaan…” ayuu yiri Xamiid Karsaay oo sheegay in hada wadahadalo adag ay la yeelan doonaan Maraykanka iyo xoogaga NATO ee dalkaasi ku sugan.
Ciidamada Shisheeye ee dalka Afghaanistaan ku sugan ayaa lagu wadaa inay wadankaasi ka baxaan dhamaadka 2014ka, balse Maraykanka ayaa doonaya inuu wadankaasi kusii lahaado xarumo military oo ka madax-banaan dowlada Afghanistaan, arrintaasi oo uu kasoo horjeedo Xamiid Karsaay oo in muddo ah xiriirka uu la leeyahay Maraykanka sii xumaanayey.
Dalka Afghanistaan ayaa bisha April ee sanadka soo socda lagu wadaa inay ka dhacdo doorashada guud, waxaana wakhtigaasi xilkiisa dhameysan doona Madaxweyne Xamiid Karsaay. Todobaadkan ayaa lasoo gaba-gabeeyey diiwaangelinta musharaxiinta xilka Madaxweynaha u taagan oo ay ku jiraan Hogaamiye kooxeed hore iyo waliba siyaasi la dhashay madaxweynaha hada xilka haya.
TV Mareykanka laga leeyahay oo soo bandhigey qaabkii loo weeraray guri ku yaalay degmada Baraawe